Baaritaankii Lagu Hayay Shirkadda Soma Oil Oo La Soo Gabagabeeyay
Xeer ilaaliyaasha dowladda Ingiriiska ayaa soo gabagabeeyey baaritaan qaatay 17 bilood oo lagu sameeyey shirkadda Soma Oil & Gas kaasoo ku aadanaa in shirkaddu ay ku kacday laaluush iyo musuqmaasuq, Soma Oil ayaa ah shirkad Ingiriirka laga leeyahay oo gaar ah taasoo dooneysa inay shidaal ka baarto Soomaaliya iyadoo ay jiraan tuhunno la xariira in shirkaddu ay geysatay waxyaabo hoos u dhigi kara sumcaddeeda.
Xafiiska baaritaannada waxyaabaha la xiriira musuqa iyo wax-isdaba marinta ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaan(SFO) kaasoo furay dacwadda bishii July kadib markii hadalka ay qaramada midoobay kasoo saartay shirkadda ayaa faahfaahin ka bixiyey dib u eegis lagu sameynayo caddeymo suurtagal ah kuwaasoo ugu dambeyn soo afjari kara musuqa shirkadda lagu eedeeyey xataa haddii lagu caddeeyo iyadoo aan la helin dhammaan wixii saamixi lahaa in lagu ciqaabo.
Xafiisku wuxuu intaas ku daray inaan weli la helin caddeyo ku filan kuwaasoo muujinaya in shirakadda ay gashay dambiga lagu soo eedeeyey laguna ciqaabi karo.
“ waxaa jira sababo suurtagal ah oo looga shakin karo guddiga dacwadda soo oogay oo ay ku jiraan musuq sidaasna waxaa lagu yiri war qoraal ah oo kazoo baxay xafiiska (SFO).
Soma Oil oo ah mid ka mid ah shirkadihii ugu horeeyey ee shidaalka baara ee gala Soomaaliya sanadkii 2013kii kadib in ka badan 20 sano oo dalku khilaaf ku jiray ayaa si xooggan isaga fogeysay inay wax qalad ah ay ku kacday.
“ Soma horey ayey u sii soconeysaa iyadoo fulineysa qorshaheeda ay ku sii baareyso shidaalka iyo inaan baaritaan ku sameyno shidaalka ay suurtagalka tahay in laga helo Soomaaliya ayaa lagu yiri war kazoo baxay shirkadda Soma Oil & Gas.
Shirkadda Soma oo uu guddoomiye ka yahay nin u dhashay dalka Ingiriiska horeyna u ahaa guddoomiyaha xisbigaka muxaafidka Michael Howard ayaa isku dayay inuu keeno loolan sharci ah oo lala galo xafiiska baaritaannada musuqa ee SFO horraantii sanadkan si loogu qasbo dacwad oogeyaasha inay midkood soo afjaraan baaritaankooda ama ay muujiyaan inaysan qorsheyneyn inay dabagal ku sameeyaan shirkadda oo ay fashilmeen.
Marka la fiiriyo xukunka maxkamadda sare ee ku aaddan iskudayga Soma Oil ay ku dooneyso in sharciyan howsheeda dib loo eego ayaa ku yimid tuhun kadib warbixin laga soo saaray shirkadda sanadkii hore waxaana la sheegay in qorshaha shidaal qodista Soomaaliya ay ku jirto in labada dhinacba ay kala macaashaan iyadoo taasina ay u saamaxeyso shirkadda Soma Oil inay hesho faa’iido ganacsi.
Xukunka oo la daabacay bishii August 17keedii sanadkan sii dhammaanaya ayaa lagu sheegay in SFO dacwaddeeda ay mugdi gelisay ganacsiga shirkadda Soma oil iyo inay tahay shirkad aan deymaha iska bixin Karin.
Marka la fiiriyo heshiiska ay la gashay Soomaaliya Soma oil waxay gacan ka geystay baaritaan lagu sameeyey shidaalka Soomaaliya illaa 60,000km oo iskuweer ah taas bedelkeedna ay kala kulantay diidmadii ugu horeysay oo ah inay baaritaan ku sameyso meelo ay iyadu dooneysay.